PILEA-QAABEEYA PILEA: DARYEELKA GURIGA, SAWIRADA DHIRTA, HABABKA TARANTA - SOOSAARKA DALAGGA
Sifooyinka koritaanka iyo daryeesha ee Peilea Peleymia guriga
Caleemaha Peppy iyo Pepper waxay u eg yihiin lacagta qadaadiicda ah ee dhererka dheer.
Sidaa darteed, sidaas darteed, waxaa loo yaqaan "geedka lacagta Chinese".
"Pilea Peperiomatous" waa wakiil ka tirsan caleemaha in ka badan afar boqol oo nooc. Waxaa iska leh qoyska qoyan. Asal ahaan, waxay ka timid Hindiya, oo sidoo kale loo qaybiyay galbeedka Shiinaha. Sida qolka koray bilowgii dhowaa, waxay u muuqatay Europe Yurub ee ku dhowaad qarnigii la soo dhaafay.
Dhirta dhirta waa 30-40 cm. Xaramka duurka waa jirid kaas oo caleemaha ay ku dhegaan petioles. Caleemaha wareegsan waxay leeyihiin dusha sare. Mararka qaarkood way ubaxsan yihiin ubaxyo yar yar, laakiin tani waxay kaliya ku xiran tahay xeerarka daryeelka jiilaalka.
"Peperus Pepper-qaabeeya" waa warshad aan la qabin: abaarta u adkaysata iyo qabow u adkaysata.
Sawirku wuxuu muujinayaa "Peileo Pepper" oo leh daryeel ku habboon guriga:
"Pepeoids Peperium-qaabeeya" waxaa lagu kori karaa dhaqanka caadiga ah ee dheriga ah, sida ubaxyo dillaac ah ee dheriyada derbiga. Kala duwanaansho xiiso leh oo ay ka mid tahay beerashada sida ubax dhulka ku jira oo leh geedo dherer badan. Macluumaadka faahfaahsan ee ku saabsan daryeelka qoyska Pilaea ayaa laga heli karaa halkan.
Ka iibsashada ka dib, geedka waa in isla markiiba laga sii daayo substrateka gaadiidka oo lagu beddelaa weel qafiif ah oo qotoma.
Carrabku wuxuu ka kooban yahay cows caleen, humus, peat iyo ciid (3: 1: 1: 1).
Waxaad isticmaali kartaa ciidda la dhamaystiray oo laga soo iibiyay dhirta caleenta geedo.
Ka fogow "Pilea" meel wanaagsan oo iftiin leh, laakiin ka taxadar qorraxda, sida caleemaha jilicsani si sahlan loo gubi karo.
Waa muhiim! Iftiinka xad-dhaafka ah "Sawirid" waa wax halis ah, caleemihiisa ayaa lumay midab. Hayso waa inaanay noqonin windowsill, iyo meel ka fog daaqadda.
Dalal ka mid ah wadamada diiran, "Pilea" waa mid diirran, hase yeeshee, heerkulka caadiga ah qolka ayaa ku haboon. Waxaa lagama maarmaan ah in laga ilaaliyo qoraalada. Xilliga xagaaga, waxaad ubaxaan kartaa ubax balakoonka ama xitaa banaanka.
Shuruudaha waraabinta iyo qoyaanka
Waraabinta "Piley" waxaa loogu talagalay inay bixiso qoyaan joogto ah oo dhexdhexaad ah. Qalabaynta qalajinta looma oggolaan karo. Laakiin qalajinta waa wax aan fiicnayn marka loo eego biyaha. Qoyaan badan ayaa ka qaybqaata suuska xididka.
Fidinta hawada "Pilaye" waa lagama maarmaan.
Laakiin si ay u buufiyaan iyada growers waayo-aragnimo leh si xoog leh looga niyadjabay, waxa ay u ekaan doonaa isha.
Si aad uhesho qoyaanka waxaa fiican in la isticmaalo siyaabo kale.
Dheriga ku rid digsi leh dhoobo ballaaran oo ka buuxsamay biyo.
Qeybta hoose waa inaysan taaban biyaha. Isticmaalka humidifier sidoo kale waa habboon xilliga kuleylka.
Haddii aad "Pilea" ku koray dheryihii la hakiyey, waxaad dhigi kartaa weelka weelka ballaaran ee ballaaran oo ku soo geli kara maqaarka qoyan.
14-15 maalmood, quudiyo geedka bacriminta guud ee dhirta gudaha. Bacriminta waa in la sameeyaa ka dib markii waraabiyaha fudud, sidaa daraadeed in macdanta si fiican u galaan ciidda oo aan lagu nuugo lakabka sare.
Iyada oo horumarinta ubax this si degdeg ah lumiso ay qurxinta, tan saldhigeed, waa in si joogto ah loo gooyaa.
Iska yaree afkoda waxaa loo isticmaalaa in la isticmaalo. Cawska ugu weyn wuxuu u baahan yahay in la xoqdo si loo kiciyo koritaanka caleemaha cusub.
Macluumaadka xilliga qaboobaha
Noocaan "Piley" ayaa dareensan in ay aad u fiican tahay heerarka dhererka iyo heerkulka toban-degree. Haddii aad u abuurto xaaladahan oo kale iyada, xagaaga waxay ku siin doontaa ubax. Inkasta oo ubax ee geedka this wax khaas ah. Ubaxeeda waa yar tahay, oo la ururiyey inflorescences yar.
Xilliga jiilaalka, waxaa lagama maarmaan ah in la yareeyo ma aha oo kaliya waraabinta, laakiin sidoo kale bacarimiso. Bacriminta geedka ee baahida jiilaalka hal mar bishii.
Peileo Pepper wuxuu jecel yahay dheriyo dhaadheer si ay xididada u helaan meel ay ku koraan.
Waa in lagu daraa sanadkiiba marxalad iftiin, dhexdhexaad ah ama carrada qoyan.
Inta lagu jiro isu tallaalidda, si looga hortago koritaanka iyo luminta haraaga, waxaa la jaraa caleemaha sare.
Warshadu waxay siin doontaa caleemo dhinaca ah mana gaari doono.
Qeybta hoose ee dheriga waxaad u baahan tahay inaad jiifiso lakab ku filan oo qasacad ah si aad uga hortagto in aad ka baxdo qanjidhada.
Ugu fudud "Pilea" waxay jebisaa gooynta. Qaadi gooyn sanadka oo dhan, sida xididdada geedka this foomamka aad u sahlan. Mishiinka jarjaran waxaa la dhigaa substrate qoyan ama isku dar ah ciid iyo peat. Sida ugu dhakhsaha badan ee nidaamyada cusubi ay ugu muuqdaan xajinta, waxaa lagu beddelaa saxarado habboon.
Waa muhiim! Inta lagu jiro rooting, gooyn waa in lagu daboolaa cap capan si ay u abuuraan saameyn aqalka dhirta lagu koriyo.
Isku dhufashada isku-dhufashada, isticmaal kabadhada.waxaa lagu buuxiyey isku dar ah ciid ciid ah iyo dhul sodan. Seeds waxaa lagu dhajiyaa dusha sare, qoyaan leh dhalada buufinta oo ku dabool weelka dhalada ama filimka. Jermin waa in lagu fuliyaa meel diiran oo dhalaalaya. Dalagyada si joogto ah ayaa loo duubay.
Seeds of "Pilea" Gagaarka si aan sinnayn, habka uu qaadan karo ilaa 50-60 maalmood. Marka jeermiska ugu horreeya uu muuqdo, muraayadda ayaa la saaraa, biqiladu waxay sii socotaa qaab furan. Dhirta leh saddex ama afar caleemo run ah waxay ku dheregtaan dheriyo kala duwan.
Beeraleyda ubaxa waxay ogaadeen saameynta abuurista tamar waxtar u leh geedkaan marka uu sii korayo guriga. Waxay yaraynaysaa welwelka, waxay yareysaa daalku waxayna hagaajisaa niyadda.
Akhristaha waxaa laga yaabaa inuu xiiseynayo waxyaabaha ku saabsan beerista iyo daryeelka ee noocyada cayayaanka sida Pildee:
Sida badanaa guryaha, "Pilea" ayaa saameeya dixiriye yaryar, caarada caarada, boodboodka.
Kala-bixintooda waxaa ka dhalan kara hawo qallalan oo ku jirta qolka ubaxa ku jira.
Si taxaddar leh u baaro dhirta iyo haddii aad ku aragto caleemaha cad caleemaha, dusha dhegta ama dhibcaha cad iyo brown, bilaabid shaqo.
Waxaa lagama maarmaan ah in la raaciyo caleemaha biyo kulul iyo daaweyn cayayaanka.
Cudurada "Pylei" waxay tilmaamayaan calaamadaha dibadda:
Caleemaha caleemaha ayaa muujinaya heerkul sare ama ka soo horjeeda heerkulka;
Caleemaha madow iyo kuwa jilicsan - biyo diirinta, mararka qaarkood waxaa lagu daraa heerkulka hooseeya. Xaaladahaas oo kale, xididdadu waxay bilaabaan inay kala jajabaan;
Laydhka Yellow ama Brownish - gubasho;
Nidaamku wuxuu ka baxaa iftiin badan. Warshadda waa in laga saaraa daaqadda.
The falloobada caleemaha hoose - da'da geedka. Haddii qaybta hoose ee warshadu ay soo baxdo, waxaad u baahan tahay inaad dib u soo noolaato "Gacanta". Waxaad geli kartaa gooyn si aad u hesho nuqul cusub.
Digniin! Geedaha ka weyn 3-4 sano ma aha mid qiimo leh badbaadin, waxay noqoneysaa fool xun, oo leh ku dhowaad caleemo hoose.
Universality of beerashada: sida ampel ama ubax caadi ah - waxay ka heshay caan ka ah bannaanka u. "Pilea" ayaa si dhaqso ah u koraysa oo uma baahnid daryeel gaar ah, sidaas darteed xitaa beeralayda aan khibrad lahayn waxay la tacaalayaan beerahooda.